Karan Johar Oo Qirtay Inuu Qeylo Iyo Aflagaado Isugu Daray Ajay Devgan – Balse Muxuusan Ragga Ula Casheyn? - Hablaha Media Network
Karan Johar Oo Qirtay Inuu Qeylo Iyo Aflagaado Isugu Daray Ajay Devgan – Balse Muxuusan Ragga Ula Casheyn?
HMN:- Filimsameeye Karan Johar ayaa daaha ka qaaday inuu markasta si buuxda isagu dayo inuu meesha ka saaro muranka ku gaafwareegaya noloshiisa gaarka ah, wuxuuna tilmaamay inuu haatan ka baqo inuu bannaanka u raaco ragga ay saaxiibada yihiin maadaama uu muran badan ka dhalan karo.
44 sanno jirkaan Director Karan Johar, ayaa wuxuu dhawaan soo saaray buuggiisa ‘An Unsuitable Boy’ – wuxuuna buuggaas uga hadlay arrimo badan oo ku saabsan noloshiisa shaqsiga ah, balse illaa haatan ma uusan xaqiijin jinsigiisa, iyadoo la isku heysto in uusan aheyn nin rag ah oo dhammeystiran.
Wareysi uu siiyey shabakadda News 18 ayuuna daaha uga qaaday inuu haatan ka fogaado asxaabtiisa ragga ah oo uusan jidka la marin maadaama dadka ku sifeeya inuu LAGAROONE yahay ay halkaas ka abuuri karaan xan ku saabsan jinsigiisa.
Karan ayaa yiri: “Waan ka cabsadaa inaan casho la aado nin kale sababtoo ah goobaha laga casheeyo dadka jooga ayaa sawirro kaa qaadaya ka dibna kugu fadeexeynaya bogaga hore ee wargeysyada.
“Haddii aan casho la aado nin kale, waxaan soo kacayaa subaxdii sawirkeyga oo saaran bogaga hore ee wargeysyada lana dhahayo xalay ninkaas ayaa sariirta la wadaagay. Marka dhankeyga laga hadlayo, caadi iima ahan in laba nin oo saaxiibo ah ay isla casho doontaan”.
Marka laga tago murankaas hareeyey noloshiisa shaqsiga ah, Kjo wuxuu sheegay inuu xilli si xun ugu qeyliyey atooraha caanka ah Ajay Devgan kaasoo ku yiri hadallo aad u xanuun badan, kuna darso waqtigaas Karan waxay saaxiibo dhow ahaayeen Kajol oo ay haatan isku dheceen. Filimsameyahaan ayaana daaha ka qaaday inuu Ajay aflagaadadaan u geystay ka hor inta aysan Box Office iskula dhicin labadii filim ee Ae Dil Hai Mushkil iyo Shivaay.
“Ajay Devgn wuu isoo wacay, ka dibna wuu igu qeyliyey, xitaa erayo aflagaado ah ayuu igu dhahay. Sababta uu aflagaadadaan iigu geystay waxay aheyd inuu soo maqlay hadal aan xaaskiisa ka sheegay xilli xaflad lagu sugnaa.
“Kajol waxay ka mid aheyd dadka iigu dhow ee aan xiriirka la lahaa, qoys oo kale ayaan isugu dhoweyn, balse haatan xiriirka naga dhexeeya ma ahan mid wanaagsan”.
Karan wuxuu ku eedeeyey Ajay inuu sumcaddiisa ku ciyaaray maadaama uu Ajay tilmaamay inuu Kjo lacago laaluush ah siiyey qolyaha aflaanka ka faallooda si ay filimka Ae Dil Hai Mushkil u siiyaan xiddigo badan sheeko ahaan, halka la liidayo sheekada Shivaay.
Haatan xiriirka u dhexeeya labadooda ayaa wuxuu gaaray heerkii ugu hooseeyey inta la xusuusto.